Fiendrika anoina Info. About. What's This?
Fiakarani Kristy any an-danitra
Fankalazana ny Fiakarani Jesosy
ⓘ Fiendrika anoina
Ny fiendrika anelanelany na fiendrika anelanelany anoina dia fiendrika hita ao aminny fiteny indo-eoropeana toy ny fiteny grika taloha sy ny fiteny sanskrita sy ny fiteny latina ary ny fiteny islandey. Raha ny heviny no jerena dia ahitana azy ihany koa ny fiteny sasany ankehitriny nefa tokony hatao hoe fitodika fa tsy fiendrika izany satria mitovy aminny fiendrika mañano ihany. Saika hitovy aminny fiendrika tampody ao aminny fiteny frantsay izy nefa tsy mampiasa mpisolo tena fameno mitovy laharana aminny mpisolo tena lazaina.
Ny fiendrika añanovana na fitodika mpamari-toe-javatra dia fiendrika na fitodika hita ao aminny fiteny malagasy araka ny fitsipiteny sy ny haiteny malagasy. Fiendrika fahatelo manaraka ny fiendrika mañano sy ny fiendrika anoina izy. Ny fitsipiteny malagasy tranainy sasany dia tsy mahalala ny fisianio fiendrika io fa mampiditra izay tokony ho isany ao aminny fiendrika anoina.
Ao aminny fiteny sasany dia ampiasaina miaraka aminny matoanteny andry ny ova-matoanteny mba hahazoana ny filazam-potoana na/sy ny fanehoan-javatra sasany. Ao aminny fiteny frantsay dia ampiasaina miaraka aminny matoanteny mpanampy avoir na être ny ova-matoanteny lasa mba hahazoana ireo filazam-potoana aminny fanehoan-javatra efa toy ny lasa tambatra frantsay: passé composé sy ny lasanny lasa frantsay: plus-que-parfait sns. Ao aminny fiteny anglisy dia ampiasaina miaraka aminny matoanteny mpanampy have ny ova-matoanteny lasa - ed sns mba hahazoana ireo filazam-potoana aminny fanehoan-javat ...
Ny fameno mpanao aminny fitsipiteny mahazatra dia fameno ao aminny fehezanteny aminy fiendrika anoina izay sahaninny teny na andian-teny manondro ny mpanao ny asa. Ao aminny fehezanteny manano, io mpanao ny asa io dia misahana ny anjara asa lazaina, ka atao hoe lazaina mpanao. Matetika dia manjavona ny fameno mpanao ao aminny fehezanteny ka ny lazaina atao na iharana na hafa miaraka aminny matoanteny no sisa ao aminny fehezanteny. Ny fiovana anjara asanny mpanao dia mety miteraka fiovanendriky matoanteny na fiovanendrikilay teny na andian-teny misahana ny anjara asa mpanao. Aminny teny sas ...
Ny fitodika mpamari-toe-javatra dia fitodiky ny fehezanteny izay misy lazaina mitana tsinjara asa toe-javatra sy entimilaza aminny endrika hafa fa tsy mitovy aminny anny matoanteny manano. Io lazaina toe-javatra io dia fameno mpamari-toe-javatra aminny fitodika hafa. Aminny fiteny malagasy, ny fehezanteny mitodika aminny lazaina toe-javatra dia misy matoanteny foroninny fototeny aman-tsirinteny sara-droa atao hoe "matoanteninny toe-javatra". Ny haiteny ara-piofohana anefa manamarika fa misy matoenteninny mpandray na hafa izay ahitana tsirin-teny sara-droa koa. Ohatra: I lalaovan ny ankizy ...
Ny matoanteny mitampody, araka ny fitsipiteny, dia matoanteny ahitana mpisolo tena fameno miaraka aminy izay mitovy laharana amin ny mpisolo tena mitana ny anjara asa lazaina na lafika ao amin ny fehezanteny misy azy. Io mpisolo tena fameno io dia mety hitana anjara asa fameno zoina mivantana na fameno zoina tsy mivantana izay manondro ny olona na zavatra tondroin ny teny misahana ny anjara asa lazaina ihany. Indraindray dia tsy ny hevitry ny fitampodian ny asa ihany no mety ho voiziny fa ny hevitra mitoina na mifanao koa. Mihevitra ny mpanao fitsipiteny sasany dia fa fiendrika na fitodika ...
Ny matoanteny dia teny izay ampiasaina ao aminny fehezanteny na fehezankevitra mba hilazana asa na toetra na fifandraisana na fisehoan-javatra ka mety miovaova endrika, filaza, fanehoan-javatra sns. arakaraka ny fiteny), nefa misy koa ny fiteny tsy manova ny endriky ny matoanteny mihitsy. Ny isanireo antom-piovanendriky ny matoanteny ireo dia miovaova araka ny fiteny. Mety hifandray aminny endriky ny teny mifandray aminy mivantana izany fiovanendriky ny matoanteny izany ka isanizany ny maha tokana na maro na ny maha kandahy na kambavy ny mpandray anjara, sns. Ireto misy matoanteny aminny f ...
Ny matoanteny mpanampy dia matoanteny ampiasaina miaraka aminny endriky ny matoanteny toy ny ova-matoanteny mba hanehoana filazam-potoana na fanehoan-javatra ao aminny fiteny sasany. Ao aminny fiteny frantsay dia ampiasaina ho matoanteny mpanampy ny matoanteny être sy avoir. Ao aminny fiteny anglisy dia ampiasaina ho mpanampy ny matoanteny be sy have. Tsy ireo ihany no matoanteny afaka misahana ny anjara asa mpanampy fa ao koa ireo matoanteny entina milaza fotoana toy ny aller sy venir sy ny hafa koa ao aminny fiteny frantsay sy ny matoanteny go sy ny hafa koa ao aminny fiteny anglisy. Tsy ...
Ny fiakarani Jesosy tany an-danitra na fiakarani Kristy tany an-danitra, izay indraindray hafohezina aminny hoe Fiakarana, dia ny fialani Jesosy Kristy avy ety an-tany any an-danitra ho any aminAndriamanitra. Ao aminny lovantsofina kristiana, araka ny hita ao aminny ankamaroanny fiekem-pinoana sy ny fampianarananny fiangonana isan-tsokajiny dia nasandratrAndriamanitra i Jesosy, izany hoe nomeny voninahitra, taorianny fahafatesany, taminny fananganany azy taminny maty sy taminny nampakarany azy any an-danitra, ka any an-danitra i Jesosy no nandray ny fipetrahany eo an-tanan-kavananAndriaman ...
Ny Fiakarani Jesosy na Fiakarani Jesoa na Fiakarana fotsiny na Andro niakarana dia fety kristiana ahatsiarovana sy ankalazana ny andro niakarani Jesosy Kristy any an-danitra efapolo andro aorianny Paska ary folo andro alohanny fankalazana ny nilatsahanny Fanahy Masina, dia ny Pentekosta. Manamarika ny fihaonana farany teo amini Jesosy sy ireo mpianany taorianny Fitsanganany taminny maty izany. Famantarana ny fomba vaovao anatrehani Jesosy Kristy, izay tsy ho hita intsony ara-batana eto aminity tontolo tsapa ity ny Fiakarani Jesosy. Mialoha lalana ny fiainana mandrakizay ho anny Kristiana i ...
Ao aminny haiteny ara-piofohana, izay lazanny mpikaroka ao aminy fa mitondra fanitsiana aminny asa nataonny haiteny araka anjara asa malagasy, dia iray aminireo fiendrika telo ny fiendrika anoina, ka ny roa hafa dia ny fiendrika manano sy ny fiendrika ananovana. Voatsinjara aminireo atao hoe fitodika zoina anefa ny hevitra ampitainny fiendrika anoina ka ireto avy izany:
Fitodika zoina toerana: Ijanonanny fiara ny eo amoron-dalana.
1. Fiendrika anoina ao aminny fiteny hafa
Maro ireo fiteny ahitana ny fiendrika anoina nefa tsy ny matoanteny rehetra ao aminy no afaka ovana ho aminio fiendrika io fa izay mahafeno fepetra, toy ny fananana fameno zoina ary mety hilaina koa ny maha mivantana izany fameno izany. Matetika koa dia ampidirina ho isanio fiendrika io avokoa ny fiendrika rehetra izay tsy isanny fiendrika manano, afa-tsy ny endri-matoanteny mitampody izay sokajina ho fiendrika na fitodika mahaleo tena arakaraka ny hevitry ny mpahay teny. Ho anireo mpikaroka ao aminny haiteny ara-piofohana dia misampana avy aminny matoanteny mañano ny matoanteny aminny fiendrika anoina. Aminny fiteny sasany, ny fampitodihana ny fehezanteny aminny anoina dia mety hanova endrika ny teny anarana na mpisolo sns atao lazaina ilay teny fameno ao aminny fehezanteny mañano.
Matetika koa dia ialohavanny mpampiankin-teny milaza ny mpanao ny asa ilay anarana na mpisolo sns mitana ny anjara asa fameno ilay teny nitana ny anjara asa lazaina tao aminny fehezanteny manano. Izany mpampiankin-teny izany dia ny hoe par ao aminny fiteny frantsay, by ao aminny fiteny anglisy, ab ao aminny fiteny latina sns. Ao aminny fiteny sasany dia ilaina ny fampiasana matoanteny mpanampy apetraka eo alohanny ova-matoanteny nefa ny fiteny sasany tsy mila anizany isanizany ny fiteny malagasy.
Frantsay: La souris est mangée par le chat. "Haninny saka ny voalavo"
Anglisy: The mouse is eaten by the cat. "Haninny saka ny voalavo"
Latina: Mus a fele editur. "Haninny saka ny voalavo"
fiteny frantsay ny fiendrika anoina Ny fiteny anglisy koa dia mampiasa ny mpanampy be arahin ny ova - matoanteny hanehoana ny fiendrika anoina Toy izany koa
sns. Misy fiendrika manano sy ny fiendrika anoina io matoanteny io. Ao amin ny fiendrika manano ang.: active voice sy amin ny fiendrika anoina ang. passive
asan Andriamanitra, araka ny fampiasan i Lioka matoanteny grika amin ny fiendrika anoina Ny Evanjelin i Joany kosa dia hoatry ny manambara izany Fiakarana
asan Andriamanitra, araka ny fampiasan i Lioka matoanteny grika amin ny fiendrika anoina Ao amin ny Asan ny Apostoly, ny mpino dia hoatry ny irery nefa mitondra
Wikipedia: Fiendrika anoina